Mponin’i Mahajanga Miandry fatratra ny fanamboarana ilay lakandrano 3,5 km
Nampanantena ny praiminisitra tamin’ny sabotsy teo fa amboarina io lakandrano lavareny mamoaka ny rano avy ao Mahajanga io,
saingy anatin’ny tanjona lavitr’ezaka izany. Voadion’ny mponina sy ny mpitandro filaminana tanteraka aloha tamin’ny alalan’ny fohy ezaka ny lakandrano avy Mahajanga izay mandalo fokontany efatra mihazo ny ranomasina. Andrandrain’ny mponina ny fanaboarana izany foto-drafitrasa izany ho manara-penitra ary tsy miandry ela. Efa eo am-pananganana ny komity any ifotony hijery akaiky ny tsy fanotofana iny lakan-drano iny aloha ny manam-pahefana sy ny mponina izay lalovan’ilay lakandrano any an-toerana, raha ny fampitam-baovao.Efa aman-taonany maro mantsy tsy nisy nanadio, sady mihamarivo no mihatery ka miandrandra fanamboarana tanteraka sady atoato ireo mponina. Araka ny fintim-baovao ofisialin’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, nanome tanana ny mponina tao Mahajanga ny miaramilan’ny Tafika Malagasy sy ny zandarimariam-pirenena ary ny polisim-pirenena miaraka amin'ireo fitaovana fanadiovana sy famonjena aina, afak’omaly. Voalaza hatrany moa fa maro ny lakan-drano efa nodiovina ka efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainan'ny mponina ao an-toerana. Ny 29 desambra no efa nanomboka nikija tsy nijanona ny orana. Efa hatramin’ny faran’ny taona tokoa no dibodrano tanteraka ny tanana maron’ny Mahajanga. Araka ny filazan’ny mponina tany an-toerana aza tsy dibo-drano fa safo-drano mihitsy no resaka mandeha.